မီဒီယာသည်ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်အရေးကြီးသောအခြေအနေဖြစ်သည် (၂၀၀၆) - Your Brain On Porn
သည် L'Engle, ကယ်လီ Ladin အဘိဓါန်, ဂျိန်းဃဘရောင်းနှင့် Kristin Kenneavy ။
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကနျြးမာရေး၏ဂျာနယ် 38 မရှိ။3(2006): 186-192 ။
ဒီလေ့လာမှုကမိသားစု, ဘာသာရေး, ကျောင်းနှင့်ရွယ်တူများအပါအဝင်အခြားလူမှုရေးအခင်းအကျင်းမှဆယ်ကျော်သက် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်နှင့်အပြုအမူအပေါ် (ရုပ်သံ, ဂီတ, ရုပ်ရှင်, မဂ္ဂဇင်း) အစုလိုက်အပြုံလိုက်မီဒီယာကနေလွှမ်းမိုးမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။
အဆိုပါအရှေ့တောင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် 1011 အလယ်တန်းကျောင်းများအနေဖြင့် 14 Black နဲ့ White ကမြီးကောင်ပေါက်များ၏နမူနာဆက်နွယ်နေသူတို့ရဲ့မီဒီယာအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. မေးလ်စစ်တမ်းများနှင့်၎င်းတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်နှင့်အပြုအမူနှင့် ပတ်သက်. In-အိမ်ပြန်မယ် Audio-CASI အင်တာဗျူးများပြီးစီးခဲ့သည်။ ဖြေဆိုသူအသုံးပြုသော 264 မီဒီယာမော်တော်ယာဉ်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာ analysis ကိုလည်းကောက်ယူခဲ့သည်။ မီဒီယာကိုဖြတ်ပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာ exposure နှင့်ဆယ်ကျော်သက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက်မီဒီယာကနေရိပ်မိထောက်ခံမှု, အဓိကမီဒီယာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုအတိုင်းအတာရှိကြ၏။
မီဒီယာကတခြားအခင်းအကျင်းမှနှိုင်းယှဉ်ခဲ့သောအလင်းနှင့်မိုးသည်းထန်စွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအတွက်ကှဲလှဲ၏% မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်ကာလ၌လိင်ဆက်ဆံခြင်းစတင်ရန်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်ကှဲလှဲ၏ 13% ကရှင်းပြခဲ့သည်နှင့် 8-10 ။ ရှိသမျှသည်အခြားသောအချက်များထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ကြပြီးနောက်မီဒီယာလွှမ်းမိုးမှုကိုလည်းရည်ရွယ်ချက်များနှင့်အပြုအမူနှင့်အတူသိသာအသင်းအဖွဲ့များသရုပ်ပြခဲ့သည်။ မီဒီယာအပါအဝင်အားလုံးဆက်စပ်အချက်များ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်နှင့်ကှဲလှဲ၏ 54-21% အတွက်ကှဲလှဲ၏ 33% ကရှင်းပြသည်။
မီဒီယာမှာပိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများနှင့်ထိတွေ့နေသောဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အဘယ်သူသည်ဆယ်ကျော်သက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက်မီဒီယာကနေ သာ. ကြီးမြတ်ထောက်ခံမှုရိပ်မိ, လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်ပိုပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအတွင်းထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ သာ. ကြီးမြတ်ရည်ရွယ်ချက်သတင်းပို့ပါ။ mass မီဒီယာမြီးကောင်ပေါက် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုဆက်ဆံရေးများအတွက်အရေးပါသောအခြေအနေတွင်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, မီဒီယာလွှမ်းမိုးမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုလျှော့ချဖို့အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်နှင့်အတူသုတေသနနှင့်ကြားဝင်အတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။